मेगा बैंक र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता — Sanchar Kendra
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ। मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेली र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका कायममुकाम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
सम्झौता अनुसार बैंकका देशभरिका १ सय २ शाखाबाट जीवन बिमाका साथै प्रिमियम भुक्तानी, दाबी भुक्तानी लगायत सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।सम्झौतापछि बैंकबाट सन नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गर्न ग्राहकलाई सुविधा हुने बैंकले जनाएको छ।
यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंक र रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सम्बन्धि सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार आईएमईका १३३ शाखा मार्फत रिलायबल इन्सुरेन्स कम्पनीको जीवन बीमा योजना खरिद गर्नुका साथै जीवन बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा छिटो, छरितो एंव भरपर्दो माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।
सम्झौतापत्रमा बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशशर्मा ढकाल र इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणबाबु लोहनीले हस्ताक्षर गरे।
बैंकका देसभर १३३ शाखा, १५ राजश्व संकलन काउण्टर, १४२ एटिएम, ७ एक्सटेन्सन काउण्टर तथा ११७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा छन्। यस्तै एनसिसी र सनराइज बैंकले ठूलो संस्थागत मुद्दती रकम निक्षेपमा राख्नका लागि व्याजदरमा भएको भद्र सहमति तोडेका छन्।
राष्ट्र बैंकको पहलमा यसअघि व्यक्तिगत मुद्दतीमा ९. २५ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दतीमा ८. ५० प्रतिशतसम्म अधिकतम व्याजदर दिन सकिनेगरी बैंकहरुले सहमति गरेका थिए।
तर यी दुवै बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा ८. ६५ प्रतिशत व्याज दिने भएका हुन्। एनसिसी बैंकले एक अर्बभन्दा बढी रकमको मुद्दती खाता नवीकरणका लागि सो दर तोकेको छ। त्यस्तै सनराइज बैंकले १० करोडभन्दा माथिको मुद्दती रकम नवीकरणका लागि सो दर कायम गरेको छ।
स्रोतका अनुसार दुवै बैंकले टेलिकमको मुद्दती रकम नवीकरण गर्नका लागि सो व्याजदर तोकेका हुन्। सो व्याजदर दिएपछि टेलिकमको रकम बाहिर नजाने अनुमानका आधारमा सो दर तोकिएको हो। आजैका मितिदेखि यो व्याजदर लागू भएको बैंकहरुले जनाएका छन्।